Maxkamad kutaala Hargeysa oo labo sanno oo xabsi ah ku xukuntay wariyaha arrimaha insaanimada ka shaqeeya ee Cabdimaalik Muuse Cooldoon - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaxkamad kutaala Hargeysa oo labo sanno oo xabsi ah ku xukuntay wariyaha arrimaha insaanimada ka shaqeeya ee Cabdimaalik Muuse Cooldoon
April 8, 2017 Puntland Mirror Somalia, Somaliland 0
Wariyaha arrimaha insaanimada ka shaqeeya ee Cabdimaalik Muuse Cooldoon. [Sawirka: Archive]
Hargeysa-(Puntland Mirror) Maxkamad kutaala magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa maanta oo Sabti ah labbo sanno oo xabsi ah ku riday wariyaha arrimaha insaanimada ka shaqeeya ee Cabdimaalik Muuse Cooldoon.
Xeer-ilaalinta maamulka Somaliland ayaa wariyaha ku eedeeyay waxay ugu yeereen “meel uga dhac jiritaanka Somaliland” iyo in uu taageeray Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Qareenkiisa oo la dhaho Maxamed Abuukar oo la hadlay wariyeyaasha ayaa sheegay in ay rafcaan ka qaadn doonaan xukunka maxkamada si ay u tuuraan xukunka ka dhanka ah wariyaha.
15-kii bishii Febaraayo ee sanadkan, Ciidamada ammaanka maamulka Somaliland ayaa wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon ku xiray garoonka diyaaradaha ee Hargeysa xilli uu ka soo noqday caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.